Ahoana no ahafahan'ny DevOps manafaingana ny fizotran'ny fampivoarana rindrambaiko - Victor Mochere
Alakamisy, Jona 30, 2022
Zava-dehibe amin'ny tontolo nomerika ny fampivelarana rafitra mahomby. Tena ilaina amin'ny fahombiazan'ny orinasanao ny fandefasana rindrambaiko ara-potoana. Ny rindrambaiko sasany dia azo ampiasaina hanatsara ny rojo fitsinjarana sy hamporisika ny fanavaozana ara-barotra. Varavarana mankany amin'ny serivisy vaovao sy loharanom-bola izy io. Ny DevOps dia nanjary tena ilaina amin'ny famokarana rafitra mahomby. Mampiasa ity teknolojia ity ny mpanjifa DevOps hamolavola fampiharana vaovao sy efa misy.
Satria ny rafitra mandeha ho azy dia mampitombo ny filana fitaovana DevOps, ny indostria dia nahita fiovana mavitrika. Satria ny orinasa dia mamoaka rindrambaiko vaovao haingana kokoa, miteraka fahafaham-po amin'ny mpanjifa izany. DevOps dia mameno ny elanelana misy eo amin'ny ekipa famokarana sy fikojakojana. DevOps dia manao fiovana lehibe amin'ny rafitra sarotra. DevOps dia fitambarana paikady voasedra hanatsarana ny dingana fampandrosoana feno.
Izy io dia fanafohezana izay mijoro ho an'ny asa fampandrosoana fa tsy dingana fampandrosoana rindrambaiko miavaka. Ny tanjon'ny DevOps dia ny handrava ny sisintany eo amin'ny fampandrosoana sy ny asa. Nandritra ny tsingerin'ny fiainan'ny lozisialy dia miara-miasa ny mpamorona sy ny ekipan'ny serivisy. Ny fitsapana, ny fampandrosoana, ny fametrahana ary ny fikojakojana dia ampahany amin'ny fomba fiasa DevOps. Afaka mifanakalo kaody ao amin'ny rafitra DevOps ny ekipa raha ao anatin'ny dingana fampandrosoana izy ireo.
Amin'ny lafiny iray, ny automation dia manampy amin'ny fitadiavana olana. Amin'ny rafitra mahazatra, ny ekipa dia afaka mifanakalo kaody amin'ny faran'ny dingana. Ny fampiharana ny tontolo DevOps dia hanampy amin'ny famoronana rindrambaiko haingana. Noho ny fahaizan'izy ireo mitsapa sy mametraka dikan-teny vaovao, mitombo avo efatra heny ny orinasa miaraka amin'ny DevOps. Navoaka haingana kokoa noho ny teo aloha ny fanavaozana vaovao sy fanatsarana. DevOps dia ahafahan'ny orinasa:
Hatsarao ny fiaraha-miasa
Ampitomboy ny fanombanana
Ampitomboy ny fiarovana ny rafitra famokarana
Amboary ny famoronana fampiharana vaovao
Mampihena ny fandaniana amin'ny fizarana
Mamokatra rafitra azo antoka sy azo antoka
Ity ny fomba anampian'ny DevOps hanafaingana ny fizotran'ny rindrankajy.
1. Fampidirana sy fametrahana tsy tapaka
2. Fampandehanana fantsona mitohy
3. Rafitra mandeha ho azy
4. Manatsara ny fiarovana
5. Fotoana haingana kokoa amin'ny tsena
Ny fampidirana tsy tapaka dia ahitana ny fampifangaroana kaody ao amin'ny fitehirizana kaody manam-pahefana ivon'io tetikasa io. Afaka mahazo valiny eo no ho eo ny mpamorona rehefa avy namoaka ny kaody. Ny tanjona voalohany amin'ny fampidirana mitohy dia ny fanatsarana ny kalitaon'ny rindrambaiko. Ny rafitra fampidirana mitohy dia manamora ny fanombanana ny kaody. Vokatr'izany, afaka mifantoka amin'ny asa hafa ny mpandrindra rindrambaiko.
Ny fametrahana tsy tapaka dia mialoha ny fampidirana mitohy amin'ny dingana iray. Raha tsy misy fifandraisana amin'olona dia mahazo ny fanavaozana kaody ny mpanjifa. Fitsapana tsy nahomby ihany no hahatonga ny fametrahana ny fanafoanana, mitaky ny fandraisan'ny olona anjara. Ny automation dia manampy amin'ny fametrahana kaody amin'ny fotoana tena izy. Ny fanaparitahana tsy tapaka dia manafaingana ny fotoana ilana vokatra iray eny an-tsena. Mampitombo ny tamberin'andraikitra eo amin'ny mpanjifa sy ny mpamorona izany.
Ny asan'ny mpamorona dia havoaka rehefa vitany izany. Afaka mamaly amin'ny fotoana tena izy ireo mpamolavola ary mamaly ireo tatitra momba ny olana rehetra. Afaka manomboka sy manamafy endri-javatra vaovao izy ireo raha te hanandrana hevitra vaovao. Ny fampidirana singa DevOps ao amin'ny rafitrao dia afaka manampy anao hitondra endri-javatra vaovao. Hampitombo ny firotsahany amin'ny serivisinao izany.
DevOps dia mampiroborobo ny ezaka ataon'ny vondrona amin'ny mpikambana rehetra ao amin'ny ekipa IT. Vokatr'izany, ny mpikambana tsirairay ao amin'ny ekipa dia manana fahatakarana bebe kokoa momba ny programa. Rehefa mampiditra ny DevOps amin'ny fampandehanan-tsolika ataon'izy ireo ny mpamorona, dia misy fifamatorana matanjaka eo amin'ny mpikambana ao amin'ny ekipa. Noho izany, ny mpikambana ao amin'ny ekipa dia mifampiankina mandritra ny dingana fampandrosoana manontolo. Izany dia ahafahan'ny manam-pahaizana miasa mandritra ny fizotran'ny fanaterana.
Ny fanavaozana rindrambaiko sy fitaovana dia mitantana amin'ny fomba tsy manakorontana amin'ny alàlan'ny asa mitohy. Izany dia atao amin'ny fomba izay ahafahan'ny dikan-teny teo aloha amin'ny fampiharana manohy manompo ny mpanjifa. Nanavao ny kinova farany izy ireo taorian'ny fitsapana sy fizarana. Mandritra ny famoahana kaody, ny drafitry ny asa mitohy dia afaka manampy amin'ny olana azo antoka.
Ho an'ny fanavaozana, ny automation dia ny ho avy. Ny iray amin'ireo lafiny malaza indrindra amin'ny DevOps dia ny automation. DevOps dia mampiasa fitaovana sy hevitra maromaro hamoronana rindranasa mampiasa fomba mandeha ho azy. Vokatr'izany, ny ekipanao dia afaka misoroka ny tsy fahampian'ny kaody loharano toy ny:
Fanomanana tsy tapaka
Amin'ny fampiasana DevOps dia tsy mila manahy momba ny lesoka ateraky ny asa tanana ianao. Midika izany fa ho afaka mamorona sy manomboka rindrambaiko amin'ny mora kokoa sy tsy miovaova ianao. Ny fitiliana automatique dia azo atao amin'ny fiteny fandaharana isan-karazany. Fitsapana izany mba hijerena raha manao izay kasaina hatao ny rindrambaiko na fitaovana. Haingana sy mahomby ny fitiliana automatique. Ny antony ao ambadik'izany dia ny fitsapana amin'ny tanana dia mila atao isaky ny miova ny code.
Saingy tsy mila atao isaky ny mandeha ny fitiliana automatique. Ny dingana izay mandeha ho azy dia tsy miovaova sy azo vinavinaina. Ny fitaovana fitiliana automatique rindrambaiko dia hanao toy izany koa. Tsy mitovy ny toe-javatra ho an'ny injeniera olombelona. Manao fitiliana amin'ny tanana mandany fotoana izy ireo, izay manampy ny fotoana sy ny fandaniana amin'ny tetikasa. Ny fahadisoan'ny olombelona, ​​ary koa ny loza aterak'izany, dia mihena amin'ny alàlan'ny automation.
Manampy amin'ny fiarovana ny rindrambaiko ny DevOps. DevOps dia mamela ny rindrambaiko handefa haingana kokoa. Midika izany fa ny olana momba ny fiarovana dia azo amboarina amin'ny fametrahana patch. Ny fitsapana fiarovana DevOps dia mandeha rehefa miparitaka ny vokatra. Ny fitaovana DevOps dia mamantatra sy manitsy ny fitrandrahana. Izy io dia mihatra amin'ny vokatra namboarinao sy izay rindrambaiko an'ny antoko fahatelo apetrakao.
Azonao atao ny mampiasa fitaovana na rafitra fandaharana miaraka amin'ny DevOps. Tsy mifamatotra amin'ny sehatra na mpamatsy sasany ianao. Zava-dehibe izany amin'ny lafiny fiarovana satria mamela anao hisafidy ny teknolojia azo antoka indrindra ho an'ny filanao. Manampy amin'ny fiarovana ny fampiharana izany amin'ny alàlan'ny fampihenana ny vulnerability amin'ny fiarovana.
Ny fiarovana ny rafitra miasa amin'ny cyberattacks dia ampahany manan-danja amin'ny dingan'ny fampivoarana rindrambaiko. Mba hiarovana ny rafitra fiasanao amin'ny fanafihana an-tserasera, dia nampiasa vola tao amin'ny orinasan'ny cybersecurity ny mpanatanteraka avy amin'ny Google sy Microsoft. Afaka mandray soa avy amin'izany ireo ekipa fampandrosoana sy miasa mba hitandroana ny rafitr'izy ireo. Hanamafy ny rindrambaiko sy ny fitaovanao amin'ny loza mety hitranga izany.
Ny rindrambaiko rehetra amin'izao fotoana izao dia maniry ny hahatratra ny tsena haingana kokoa. Ny fomba iray hahatongavana any dia ny fametrahana DevOps. Raha hita mandritra ny fitsapana ilay olana, dia haingana kokoa ny famahana azy ireo. Ny rafitra DevOps dia manana mekanika hahatongavana haingana kokoa amin'ny tsena. DevOps dia miezaka ny hampiroborobo ny fiaraha-miasa eo amin'ireo mpanara-maso ny rafitra.
Izany dia miteraka fotoana haingana kokoa ho an'ny vahaolana vaovao. DevOps dia ahafahan'ny mandefa ny fanavaozana tsirairay amin'ny tsena. Ny fantsona DevOps dia mampitombo ny fahombiazany ary manamora ny fiaraha-miasa amin'ny ekipa. Afaka mamorona vahaolana haingana kokoa ao anatin'ny fe-potoana vitsy kokoa miaraka amin'ny fizotry ny asa tsy misy olana ny mpamorona. Noho izany, ny famoahana ny vokatra dia lasa mahomby kokoa sy tsy miovaova.
DevOps dia mitondra fomba fanao hamitana ny fampivoarana rindrambaiko. Tafiditra ao anatin'izany ny ekipa fampandrosoana sy miasa hiara-miasa. Ny ekipa dia afaka miasa amin'ny famokarana sy asa hafa miaraka amin'ny fampidirana sy fametrahana tsy tapaka. DevOps dia nanova ny fizotran'ny fampiroboroboana rindrambaiko. Manome fisondrotana lehibe amin'ny hafainganam-pandehan'ny asa izany. Hampitombo ny vokatrao izany ary hitazona ny mpanjifanao hiverina. Izany dia toe-javatra mandresy lahatra ho an'ny antoko rehetra mifandraika amin'izany.
Hevitra ara-barotra tetibola kely hampitomboana ny orinasanao